true solutions /zu-ZA/tools-for-life/solutions/steps/how-dangerous-is-the-environment.html completion 0 6 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/solutions_zu_ZA.jpg Izixazululo Zendawo Eyingozi
Halala, ! Uqede Izifundo ze-Online yeziSombululo zeMvelo Eyingozi!
Lesi sitifiketi sithunyelwe ekhelini lakho le-email sibonisa ukuqeda kwakho.
Singathanda ukwazi nganoma yikuphi ukuqaphela noma ukuthuthuka okuhlangabezane nakho ngokuthatha isifundo lesi, noma enye impumelelo onayo ekusebenziseni ubuchwepheshe obufunde kuleyi nkambo. Ungasazisa khona lapha:
Hlela igama esitifiketini sakho
Kulungile ukushicilela (?)
(?) Sivame ukushicilela izindaba zempumelelo ezivela bafundi futhi singathanda imvume yokushicilela eyakho. Lokhu kwenziwa ngaphandle kokusebenzisa igama lakho noma olunye ulwazi ngawe siqu, olugcinwe ngokuzethemba. Impumelelo eshicilelwe ifaka kuphela izinhlamvu zokuqala zegama lakho.
THUMELA IMPUMELELO YAMI
Isifundo sakho esilandelayo
Izingxabano zivame kakhulu emhlabeni namuhla kangangokuba abantu abaningi bazithatha kalula nje ukuthi iyonandlela impilo okufanele ibe yiyo. Kodwa ke akuyona into yemvelo...
Nazi izifiso eziyisishiyagalombili zokusinda noma “ama-dynamics” enza impilo uqobo. Ngokuqonda lezi, imisele yokuphila yeqa futhi unga...
Ukuntuleka kokuqonda kuyisici esijwayelekile kukho konke ukukhathazeka nokuxabana. Kule ncwajana, izinto ezintathu ezakha ukuqonda zibhaliwe:
Kukhona labo abangathanda ukuthi ukholwe ukuthi umhlaba okuzungezile uyingozi kakhulu kunokuba kunjalo empeleni. Vula izindaba noma uthathe iphephandaba...
Lapho ubhekene nokugula noma ukulimala kwabangane noma kwamalungu omndeni umuntu angathanda ukubasiza.
Uma ngabe uphoxiwe ngokuzumayo ngokungazelelwe ngumuntu omethembayo, uma uke wezwa ubuhlungu lokungathembeki olwenziwe ngumuntu omthandayo, uma u...
Izingcindezi nezinkinga impilo ezifaka emshadweni zingavivinya noma ubudlelwane obunothando kakhulu. Kepha kungenzeka ukubuyisela umshado futhi,...
Angaba makhulu kangakanani amathuba ethu empumelelo uma singaqagela ukuthi umuntu esihlangana naye uzophumelela athembeke noma angathembeki? Mhlawumbe usebenzisa i-hard-won...
Awukho umkhakha wempilo ongathintwa ubhubhane lokusebenzisa kabi izidakamizwa. Ubugebengu nodlame kuyimikhiqizo esobala kakhulu, kepha izimpilo zonakalisiwe noma zilahlekile kwizidakamizwa...
Susa izimfihlakalo, imibono engenzi lutho oluncane ukuze kudambiswe izinkinga nokungaqiniseki ngokukhulisa izingane. Kuqukethwe...
Umsebenzi uthatha ingxenye eyisikhombisa kweziyishumi yezimpilo zethu. Inquma ikhono lethu lokuxhasa abondli bethu futhi nathi uqobo, isungula ikhwalithi yempilo yethu futhi,...
Cishe wonke umuntu angathanda ukuthuthukisa izimo empilweni yakhe. Kepha ukwenza kanjani? Uthini ngabe bekukhona ngqo amafomula umuntu angawalandela ukuthuthukisa...
Wake wazibuza ukuthi kungani abanye abantu begula njalo kanti abanye babonakala bephila ngokungazweli emphefumulweni? Kwincwajana,...
Ngena kwi-Intanethi noma uthathe iphephandaba futhi uzothola zonke izinhlobo zezincazelo zokuthi kungani le nhlangano yehlulekile noma lelo hlelo lepolitiki laqhuma….
I-organization yisifundo esingafakwa emisebenzini emincane kakhulu noma enkulu kunazo zonke. Kusuka endlini yomuntu kuye kwi-mega-corporation kungokwakhe...
Ubudlelwano bomphakathi buhlinzeka ngezindlela zokuxhumana ngemibono yakho futhi uzenze zamukelwe—okufuneka ngekhono lapho usebenza nemibono emisha. Kunjalo...
Ukuthola umgomo akunzima ukwenza. Abaningi bethu asinakho ukushoda kwamathemba nezifiso, futhi empeleni lezi yizinto zokuphila. Kepha ngesikhathi esifanayo...
Baningi kakhulu abafundi abaphothule esikoleni nasekolishi kodwa abakwazi ukusebenzisa lokho abakufundile esikoleni. Akukhona ukuthi bayiziphukuphuku noma ukuthi...
Amakhono wokuxhumana abalulekile kukho konke esikwenzayo empilweni. Eqinisweni, lapho konke kushiwo futhi kwenziwa, kunoma yiliphi izinga, ukuxhumana kungumsebenzi owodwa...
Ungafunda kabanzi nge-Scientology eseduze kwe-Organization ye-Scientology engalungile. Wamukelekile nganoma yisiphi isikhathi. Woza namuhla uzitholele wena.
Izincwadi zesingeniso ze-Dianetics and Scientology ziqukethe izinto ezintsha ongazisebenzisa ukufeza injabulo nenkululeko yomuntu siqu evela ekuziqondeni ngokweqiniso.